9.7-inch iPad Pro Review: Better Ka Badan Pro Big?
Dib u eegista Apple-da 9.7-inch iPad Pro
Haddii iPad-ka 12.9-inch ee iPad Pro uu yahay mid ka weyn, iPad Air , Apple's 9.7-inch iPad waa mid yar oo badiyaa iPad Pro. Waa sahlan tahay in la tilmaamo kiniinkan sida iPad Pro yaryar, laakiin markaan eegno muuqaal wanaagsan, waxaan helaynaa dhowr wanaajin oo ka weyn kan walaalkiis ka weyn oo leh meelo yar oo 9.7-inch iPad Pro hoos u dhacdo .
Waxaan ku qeexay 12.9-inch Pro sida "kiniinka qoyska ugu dambeyntii." Iyada oo awoodda farsamda ku filan si ay u dhisto laptops-ka ugu badan, waxa si cad loogu talagalay shirkadda. Laakiin muuqaalka quruxda badan leh iyo codka dheer, codka cad ee ka soo baxa afarta qof ee ku hadla ayaa ka dhigaya mid ku haboon in lagu soo bandhigo muusikada iyo filimada. Haddii iyo 12.9-inch iPad Pro waa kiniinka ugu muhiimsan qoyska, 9.7-inch oo kala duwan ayaa ah saaxiibka ugu muhiimsan safarka. Waxay leedahay afarta luuqadood oo isku mid ah, muuqaal la hagaajiyay xitaa ka badan 12.9-inch Pro iyo kamarado badan oo ka fiican.
A Smaller iyo inta badan Better iPad Pro
9.7-inch iPad Pro ayaa ka bilaabanta $ 100 qaali ka badan qiimaha asalka ah ee iPad Air 2, laakiin wax badan ayay ku xiran tahay Benjamin dheeraad ah. Xaqiiqdii, halka 12.9-inch Pro Pro uu ka badan yahay $ 200, 9.7-inch Pro waxay dhab ahaantii ku fiican tahay siyaabo badan. Iyo (dabcan) waxay garaaci doontaa iPad Air 2 biyaha.
Apple wuxuu sameeyey wax weyn oo ka mid ah bandhigga True Tone, kaas oo isticmaala dareemayaasha si loo hagaajiyo iftiinka iyo diirimaadka bandhigga iyadoo lagu saleynayo iftiinka iftiinka. Ficil ahaan, bandhigyada labadaba waxay sameeyaan wax la mid ah qoraxda tooska ah, laakiin markaad baratid heerar kala duwan oo hoosaad ah, iPad Pro ee Tijaabada True Tone ayaa hubaal ah. Muuqaalka sare, muujinta iPad Pro ayaa si cad u caddeynaya marka loo eego iPad Air, taas oo fududeyneysa akhriska. Tani waxay ka duwan tahay kumbuyuutarka labadaba marka la eego iftiinka macmalka ee gudaha marka hawadu ay u muuqato mid cadaan ah halka iPad Pro ay ku qaadato midab huruud ah si loola macaamilo iftiinka iftiinka. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan bandhigga saxda ah ee akhriska iyo haddii ay tahay ama ayan sameynin wax badan oo isbeddel ah.
IPad Pro-da ayaa sidoo kale leh bandhig muuqaal ah oo ku habboon noocyada midabka ee lagu qabtay sawirada filimada. Taas macnaheedu waa Pro-ga ma aha oo keliya inuu sawiro iyo muuqaal ka muuqdo oo ka fiican iPad kasta oo kale, waxaa kale oo uu kuu ogolaanayaa in aad wax ka beddesho sawiradaas iyo fiidiyowyo leh sax ah.
Marka la eego codka, 9.7-inch iPad Pro wuxuu leeyahay qaab isku mid ah kalfadhiga hadalka sida walaalka weyn. Tani waxay ka dhigeysaa farqiga codka u dhexeeya iPad Air 2 iyo 9.7-inch iPad Pro sida iftiinka iyo maalinta. Pro ma aha mid aad u sareeya, sidoo kale wuxuu leeyahay cod aad u badan. Sababtoo ah iPad-ku wuxuu dib u habeyn karaa codka ku saleysan sida aad iPadka u haysaneyso, ma aad heli doontid saameyntaas murugsan haddii aad ku dhejisid dhamaadka qaladka iPad ee dhabtaada. Tayada maqalka ah ma ahan mid aad u fiican sida 12.9-inch Pro iyo ma laha mugga iPad-ka ballaaran, laakiin waxay ka horeysaa Air iyo Mini.
Oo aynaan ilaawin kamarad! IPad-ka Tani waxay leedahay 12 kamaradood oo kamarad MP ah oo leh cajalado 4K video ah iyo waxyaabahan oo kale sida feejignaanta joogtada ah. Waa aasaas ahaan kamarad tayo leh oo tayo leh oo ku saabsan iPhone 6. Waxa kale oo ay taageertaa (duubka rinjiga, fadlan .... ) Live Photos . Kuwani waa sawirro muujinaya daqiiqad dhan oo sawir ah, oo asal ahaan noqda 1-2 fiidiyow oo labaad markaad taabato sawirka. Kamaradda horay u soo jeedda waxay sidoo kale leedahay horumar. Tayada ayaa kor u kacday ilaa 5 MP waxayna taageertaa Retina Flash, taas oo soo bandhigaysa muuqaalka xargaha si aad u kasbato kalsoonida.
9.7-inch iPad Pro sidoo kale waxay taageertaa Calaamadeynta Mashiinka iyo Smart keyboard. Qalabkani waa stylus aan ahayn stylus, adoo adeegsanaya dareemayaasha bandhigga iyo tignoolajiyada Bluetooth si loo abuuro qalab sawir ah oo sax ah. Iyo maxaa yeelay maaha qalab dhab ah, waxaad dhab ahaantii gacanta ku heyn kartaa bandhigga oo wali isticmaali kartaa qalabka. Smart Keyboard waxay isticmaalaan isku xiraha adoo adeegsanaya iPad Pro si ay ula xiriiraan, markaa ma jirto baahi loo qabo in lagu xiro qalabka. Akhri Sida Loo Isticmaalo Khaanadaha Apple si aad wax badan uga barato.
Laakiin ma ahan 12.9-inch iPad Pro
Waxaan ku soo koobay in 9.7-inch iPad Pro uu ahaa "inta badan" ka fiican yahay version 12.9-inch. Waxay leedahay muuqaalo wanaagsan sida muuqaalka tooska ah iyo midabka midabka iyo awoodda ay ku qaadan karto Sawirada Live oo leh kamaradii la hagaajiyay, laakiin maahan sida ugu dhakhsaha badan sida walaalkiis ka weyn. Farqiga u dhexeeya gawaarida ayaa ah mid ciriiri ah, laakiin waxaa jira, iyadoo 12.9-inch iPad Pro saacadaha ku dhow boqolkiiba 10 dhaqso. Pro-da weyn wuxuu leeyahay xoojin aad u ballaadhan oo leh sawirro, laakiin qaabka xalinta sare ayaa cuni doona qaar ka mid ah horumarintaas.
9.7-inch Pro waxay sidoo kale ciyaaraan 2 GB oo xasuusta marka la barbardhigo 4 GB oo ah 12.9-inch. Tani maahan heshiis weyn hadda, laakiin, sida barnaamijyada loogu talagalay khadka Pro ee iPads ayaa bilaabanaya soo kacaya, xasuusta dheeraadka ah waxay u oggolaan doontaa iPad Pro in uu noqdo mid wax ku ool ah oo ku saabsan munaasabadaha kala duwan iyo shaqada-beddelida u dhaxeysa barnaamijyadan caaqil ah.
Iyo sida lagu xusay, codku waxoogaa wuu ka wanaagsan yahay Pro weyn. Mugga ayaa ah waxa ugu badan ee la dareemayo, iyadoo 12.9-inch Pro Pro ku dhowaad laba jeer oo aad u sareeya. Laakiin waxaa sidoo kale jira tayo yar oo tayo leh. Tani ma aha mid aad u adag sida farqiga u dhexeeya Air iyo 9.7-inch Pro, laakiin weli waa la maqli karaa.
Ma yahay 9.7-inch iPad Pro Worthy Upgrade?
Qof walba wuxuu jecelyahay iPad Pro. Haddii aad ka soo kordhay kiniinada iPad-ka hor sida iPad 4, si fudud wax walbaa u fiicnaan doonaa. Laakiin xitaa kuwa ka soo kabanaya iPad Air 2 waxay la kulmi doonaan adduunyo kala duwan. Waxaa jira muuqaal wanaagsan, dhawaaqa aad u fiican, kamarado badan oo aad u fiican iyo processor-ka badan oo badan. Waa mid ka mid ah boodbooyinka ugu weyn ee iPad la arkay tan iyo markii iPad la soo bandhigay.
Ma u baahan tahay inaad cusboonaysiiso? Haddii aad weli ku jirto Air, waad sugi kartaa. Iyadoo laga eegayo barnaamijyada, iPad Air iyo iPad Air 2 ayaa ku shaqeyn doona wax kasta oo ka shaqayn doona iPad Pro line of kiniinnada. Tani waxay sidoo kale run u tahay iPad Mini 2 iyo iPad Mini 4. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad sare u qaaddo si aad u hesho waxyaabo qabow sida Sawir Sawirada, taageerada muraayada Apple, iyo Smart keyboard.
Haddii aad wali isticmaalayso iPad 4 ama ka weyn, oo ay ku jiraan iPad mini-kooda, hadda waa waqtigii la casriyeyn lahaa. 9.7-inch Pro wuxuu noqon doonaa xawaare sare oo xawaare sare ah, wuxuu taageertaa sifooyinka sare ee faro badan, oo ay ka mid yihiin Koodhka Dokumentiga labadaba amniga iyo roonaanta, taageerida qalabka ugu dambeeya, dhawaaqa wanaagsan, kamarad la hagaajiyay. . . ma u baahanahay inaan tago?
10 Farqiyada Inta u dhaxeysa 9.7-inch iyo 12.9 inch iPad Pro
Soo iibso Amazon
Maxaad ubaahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan iibsan MacBook la Isticmaalo
7da Lacag ee Best USB-C ee lagu iibsado sannadka 2018
Sida Loo Doorto Laptop Best Best baahidaada
7 Shandadood ee ugu wanaagsan ee Macquulka ah ee loo iibsado sannadka 2017
Ma isticmaali kartaa Chromebook sida Kumbiyuutarkaaga Guud
Apple Stealth & Deals: Apple TV iyo ASUS RT-AC68U Wireless Router
Waa maxay Muuqaalka Muuqaalka saxda ah? Anigana daryeel ma
Iskuday Miisaanka Masaafada - Qaybta 3 - Muuqaal
Nidaamka Heerka Sare ee Apple Watch
Sidee looga hortagaa dadka ka soo horjeeda adiga oo eegaya Sawirkaaga Facebook
Waa maxay Amazon Prime?
Sida Nuqul ama Dukumiintiyada Google loogu soo Celiyo
Isticmaalka Foomka Autofill ama Autocomplete ee Browser-kaaga
Macluumaadka been-abuurka ah: Saddex Siyaabood oo Lagu Ogolaanayo Haddii Mawduuca Online-ga uu Badbaado
"Ballistic: Suuqyada iyo qaar ka mid ah" Cheats for Gameboy Advance
Dhammaan Ku Saabsan MPEG Streamclip: Dhiirrigelinta iyo Soo-saarista Fiidiyeyaasha
9ka ugu fiican ee loo yaqaan IFTTT Applets For Alexa
Sida Loo Ciyaaro Ciyaaraha YouTube-ka Mashiinka Moobaylka
Sidee loo daabacaa iPad-ka
Maxaa ka shaqeeya Guriga Google?
Calaamadaha caanka ah ee Instagram waa inaad isticmaashaa
Awoodda iyo Naafeynta Dhameystirka Mode ee Microsoft Edge
Wax ka beddelidda su'aal ku jirta Microsoft Access
Waa maxay Foomka ATOM?
Sidee isku xidhka Google Guriga Wi-Fi
Sida loo qoro Blog Dadku waxay rabaan inay wax akhriyaan
Waa Maxay Kicitaanka? (Qeexitaanka)